Uchwepheshe wekhompiyutha waseMartin uthi izigidi ezingama-960 ezivela ku-Ebay nasePaypal - AFRIKHEPRI
Usosayensi we-computer waseMartinican uthi izigidi ezingu-960 ku-Ebay ne-Paypal
Yenza uMakandal, unifier omkhulu kanye nomkhululi wenkululeko ezindleleni ezifanele Bantu
UJosé Montet, usosayensi wamakhompyutha waseMartinican
UJosé Montet, ososayensi wekhompiyutha we-48 iminyaka, uqinisekisa, amalungelo obunikazi ekusekeleni, ukuba abe umsungula uhlelo lokukhokha oluvikelekile kwi-intanethi esetshenziswe kusukela yizizwe ezimbili. Ubabela namuhla enkundleni enkulu yeParis.
UJosé Montet, usosayensi wekhompiyutha waseMartinican
Uhlasela ama-behemoth amabili. UJosé Montet uthi angaphansi kuka-960 million euro emazweni amabili: i-eBay (indawo yokuthengiswa kuyo inthanethi) ne-Paypal (indawo yokukhokha inthanethi). NgoLwesine, i-Martiniquais nommeli wakhe babela lezi zinkampani ezimbili ngaphambi kwenkantolo enkulu yaseParis. Ngempela, nommeli wakhe, usosayensi wekhompiyutha wanquma ukuthutha imoto. "Sithengise i-imeyili cishe iminyaka emibili kodwa bangenza ngigijime emibuthanweni. Kuze kube namuhla, abakwazi ukufakazela ukuthi babekhona ngaphambi kwami.
Enhliziyweni yengxabano, isoftware yokukhokha evikelekile ku-inthanethi. Ekupheleni kweminyaka yama-1990s, ngesikhathi lapho ukuhweba nge-inthanethi kwakukhula khona futhi, ngasikhathi sinye, inkohliso yamakhadi wesikweletu yayigcwele, uJosé Montet wacabanga ekhoneni lakhe "uhlelo olulula nolusebenzayo" lwe vimbela inkohliso. "Kunezinqubo ezimbalwa zokuphepha, kepha bezingabiza kakhulu ukuzisebenzisa, noma zibumbeke njengebhokisi leMerka lapho umsebenzisi we-Intanethi kwakufanele aqhubeke nokuhlala kulo."
Usosayensi wekhompyutha wayezoba nomqondo olula, "kodwa kwakudingeka ucabange ngakho," usho kanje. Ukuthola izinkokhelo kwi-inthanethi, ucabanga ngokuhlanganisa inombolo yekhadi lesikweletu nge-e-mail ukukhomba umthengi ngamunye. "Ekuqaleni, ikhasimende lifaka imininingwane yakhe yasebhange futhi icela i-e-mail yakhe. Kuzo zonke lezo zinto ezalandela, akasadingeki ukungena amakhodi akhe ekhadi. Lapho nje isetshenzisiwe, i-imeyili imxwayisa "
"E-mail eyimfihlo" (Imfihlo ikhona e-mail) yazalwa. UJosé Montet uthumele i-patent yokuqala eFrance kwi-Program Protection Agency (APP) i-31 August 2000 kanye ne-patent yesibili e-United States, evela e-United States Copyright Office, 20 September 2000. Ngesikhathi esifanayo, umsunguli ukhulume kabanzi ngokusungula kwakhe. Uxhumana nezinkampani eziningi ngokusebenzisa izindlela ezahlukene (ifeksi, ucingo, i-imeyli, izincwadi) futhi uhlanganyele ohlelweni lwe-LCI olukhuluma ngenkohliso yamakhadi esikweletu.
"Yilapho ngathola khona umengameli weqembu lamakhadi asebhange (GIE). Ngezikhathi ezimbili, ngabonisa iphrojekthi yami endaweni yayo, phambi kommeli wami. Futhi-ke, akukho lutho ... kuze kufike ku-2007. Ngokuvakashela iwebhusayithi yePaypal ukuze athenge, uJosé Montet uthola ukuthi inkampani esekelwe eLussia isebenzisa inqubo efanayo naye.
Uqale izingxoxiswano ezinde ne-Paypal ne-eBay abathengile inqubo ku-2002. Ama-interlocutors alo aqinisekisa ukuthi isistimu esetshenziselwa i-"E-mail eyimfihlo" eyenzelwe iMartinique. "Angisho okuphambene nalokho kodwa, kulokhu, ngivumele ngikuqinisekise! Kuze kube manje, idokhumenti endala kakhulu bayakwazi ukusinika izinsuku kusuka ku-2001, okuyilayisensi enikezwe ngu-State of Oregon 27 April 2001 ". Izinyanga eziyisishiyagalombili ngemuva kwelungelo lakhe lobunikazi.
I-Paypal ivuselele kabusha "uhlelo" lwakhe ku-eBay ye-1,5 amadola ayizigidigidi ezidlule eminyakeni engu-10 edlule. "Izigidi ze-960 zama-euro engizibiza azifani lutho uma kuqhathaniswa nokuzuza nezinzuzo ezivela kulezi zinkampani." Ifayela manje lisesandleni se-3ème chambre, ingxenye ye-2ème ye-tribunal de grande instance yaseParis. Ku-2002, i-Paypal ithengise uhlelo lwayo lokukhokha kwe-intanethi (olubizwa) ku-eBay ye-1,5 billion.
Amantombazane amabili wewebhu
I-Paypal, insizakalo yeqembu le-eBay iyinkampani ehola inkokhelo yokukhokha e-intanethi emhlabeni wonke, ne-98 izigidi zama-akhawunti asebenza ezimakethe ze-190 ze-4,4 inzuzo eyinkulungwane. I-eBay, i-American firm brokerage firm, eyaziwa ngewebhusayithi yayo yokuthengisa, inokuthengwa kwansuku zonke eduze kwe-11,6 billion.
Okushiwo yizinkampani ezimbili
Ukunikezelwa enkantolo, eBay nasePaypal basebenzisa izimpikiswano ezahlukene zokuzivikela. Ngaphandle kokungabaza ukufana kwezinhlelo ezimbili zokuthola inkokhelo ye-inthanethi, i-Paypal ithi iqale ukuyisebenzisa kusukela ku-1998, okungukuthi, iminyaka emibili ngaphambi kokusebenza kwe-patent kaJosé Montet. Kodwa, ngokusho kweMartinique, amadokhumende ahlinzekwe kude nabo, ayengeke avumele ukubuyela emuva ngaphambi kwe-2001.
Lezi zinkampani zombili ziphikisana nokuthi isicelo asifanelekile njengoba kuwumqondo olula. Futhi, ngokusho kwabo, umthetho waseFrance ne- "copyright yaseMelika" bavikela kuphela imisebenzi kanye nokuveza imibono, hhayi imibono enjalo. Ummeli womenzi wesicelo uyaqinisekisa, kunalokho, ukuthi akuyona umqondo olula njengoba kuvezwe kwisoftware. Lezi zinkampani zombili ziyamangala futhi ukuthi isenzo sezomthetho sathathwa ngemuva kweminyaka eyi-10. Ekugcineni, bakholelwa ukuthi uJosé Montet akabanikezi ubufakazi bokuthi uPaypal wephula amalungelo akhe.
"E-mail eyimfihlo": isakhi esilula futhi esisebenzayo
Ngo-Agasti noSeptemba 2000, uJosé wadala amalungelo amabili obunikazi, elinye laseFrance nelinye elase-United States. "I-imeyli eyimfihlo" (imfihlo ikhona e-mail) yayihloselwe ukulwa nokuthengwa kwekhwabanisi ekhadini lebhange elivukela kwi-intanethi kusukela ekupheleni kweminyaka ye-90. Usosayensi wekhompyutha wayenombono olula: izinkokhelo eziphephile kwi-intanethi ngokuhlanganisa ikheli le-imeyili nenombolo ngayinye yekhadi lesikweletu ukukhomba umthengi. Lokhu kukuvumela ukuba uthumele umlayezo ngokuzenzakalelayo umyalezo we-imeyili ekuthengeni ngakunye okwenziwe. Ngaphandle kwesistimu evikelekile, noma ubani onenombolo yekhadi eyebiwe kumnikazi wawo, ithikithi lekhadi lesikweletu, ngempela angayisebenzisa ngemikhiqizo ngobuqili kwi-intanethi.
Ngokusho kombiko owenziwe eParis 28 January 2011 yi-agent efungisiwe ye-Agency for the Protection of Programs (APP), uhlelo okwamanje olusetshenziswe yi-Paypal yezinkokhelo ze-inthanethi "lifana nazo zonke izici" ukuze eyakhiwe nguJosé Montet. Ekuzivikelweni kwabo, izinkampani ze-eBay ne-Paypal aziphikisi leli phuzu.
Uhlelo lokusebenza lwe-Android lunikeza amaRwanda ukufinyelela okungenasiphelo kunezincwadi ze-500
Ubuhle be-usawoti namanqamu oLwandle Olufile
Izifundo ezinhlanu kwi-psychoanalysis: Ukuqapha umnikelo kwezehlakalo zomnyakazo we-psychoanalytic